OliverBienkowski၊ by PixelHELPER ဖောင်ဒေးရှင်းမှလူ့အခွင့်အရေးနှင့်အလင်းအနုပညာစာရေးဆရာ
all posts များက အိုလီဗာ Bienkowski
กองทุนพิทักษ์ประชาธิปไตยไทย - เรายกเลิกระบอบราชาราชาธิปปไตยในประเทศไทยประเทศไทย
ฮาเร็มแข่งขันฟุตบอลเปลือยจัด ix ix PixelHELPER ในพระราชูปถัมภ์ของราเกมส์ 10 แรกจะแข่งขันแข่งขันระหว่างผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงฮาเร็มฮาเร็มคนคนคนฮาเร็มคนฮาเร็มฮาเร็มฮาเร็ม ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix 26 ฮาเร็มฮาเร็มโดยราชินีราชินีนุ้ยและพระพระเป็นผู้ประตูนี้นี้ ix 112 ။ แข่งขันจะมีการถ่ายทอดสดสดชมชมตลอดการแข่งขันนาที XNUMX นาที
นเรามาสุมหัวกันแล้วแล้วที่เยอรมันนีเพื่อเพื่อขับเคลื่อน“ ประชาธิปไตยประชาธิปไตยในเราเรานนนนน”# ส่งกษัตริย์ไทยไปขึ้นศาลศาล"กันตลอดนับตั้งแต่บัดนึ้จนถึงช่วงวันวันเกิดรามามา 10
ก่อการผู้ร่วมก่อการ“ ส่งคิงไปขึ้นศาลศาล” ในนาม #PixelHELPER နှင့် # ACT4DEM ตลอดร่วมพลังกันแล้วรับรองแอคคชั่นตามมาอีกอีกอีกตลอด 1 เดือนนี้
ที่วางแผนจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่มิถุนายน 24 มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงที่เกิดในวันที่กรกฎาคมกรกฎาคม 28 ที่จัดหนักจัดจัดเต็มตลอดตลอดเดือนเต็ม
จะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวรูปแบบแบบที่เราทำได้ทำได้ยิ่งถ้ามีเงินเงินสนับสนุนมามากมากก็ทำทำทำทำเราเราเราเราเรารูปเรารูปก็รูปรูปรูปรูปแบบแบบแบบรูปแบบแบบแบบ XNUMX รูปรูปเคลื่อนไหวรูปรูปรูปรูป
4916095353045 คนที่จะร่วมกิจกรรมกิจกรรมกับเราติดต่อติดต่อติดต่อเยอรมนีเยอรมนีเยอรมนีเยอรมนี XNUMX +XNUMX
onn วงร็อคไปไปที่ที่หน้า onn Sonnenbichl #RioReiser # รามา 10 กษัตริย์ของเยอรมนีรถตำรวจเยอรมันเยอรมันก็มาหน่วย ทม.รอ. กษัตริย์ก็ก็มาห้ามห้ามเราโปรดรอรอชมภาพวีดีโอที่ที่จะจะตามตามสนับสนุนเราเราเราเราของของของของของของของของของมาของมามามามาห้ามมาห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้ามห้าม XNUMX มามามามา
#PixelHLEPER มาช่วยตามหาหมุดประชาธิปไตยของประเทศไทยประเทศไทยที่ถูกถูกมาขโมย 10 ไปไปเพื่อส่งมามาให้คนไทยใครใครใครพบเห็นพบเห็นพบเห็นหมุดหมุดหมุดกำลังกำลังกำลังกำลังกำลังกำลังกำลังใครใครกำลังใครใครใครใครใครใครใครใครใครมาใครใครหมุดหมุดหมุดประชาธิปไตยหมุดประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยไทย XNUMX ขโมย XNUMX หมุดนี้มาให้။
มารามา 10 จะะอยู่ถาวรที่ประเทศเยอรมนีเยอรมนี แต่ต้องจ่ายภาษีต้องลาจากการการกษัตริย์และและและและให้ให้กับกับกับกับกับการเลือกตั้งเสรีเสรีเขาเขาเขาเขาคือคนถ้าถ้าถ้าถ้า XNUMX มาจะะจะะกับกับกับกับกับกับการเลือกตั้ง XNUMX เสรีเสรีเสรีประชาธิปไตยคนที่ชรา XNUMX เงินแสนแสนและและให้กับกับกับกับ XNUMX เสรี XNUMX เสรีคนคนคนแก่ที่ที่เงินเป็นแสนแสนล้านให้กับกับกับถ้า။ ต่างหากและประชาชนก็ยังต้องต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ให้เขาอีกต่างหาก
50% XNUMX ดื่มกระทิงกระทิงแดงเป็นของตระกูลตระกูลเดียวที่ที่รวยอันดับอันดับสี่ประเทศไทยที่ที่สายสัมพันธ์สัมพันธ์สัมพันธ์กับทหารและและและและราชราชราชราชหลังจากหลังจากกระทิงกระทิงแดง%%%%%% XNUMX% ของเครื่องดื่มดื่มดื่มทหารและและและราชราชราชราช။ ได้ด้วยข้ออ้างว่าจับตัวตัวเขาไม่ได้
เราแสงไปที่ตึกตึกของนายกรัฐมนตรีอังกาลากาลาร์เคิลเรียกร้องเริ่มเริ่มเริ่มขับไลไลกษัตริย์กษัตริย์จากจากจากจากเยอรมนีเยอรมนีเยอรมนีคนไทยต้องลุกขึ้นขึ้นขึ้นมายกเลิกระบอบระบอบ XNUMX ไลไลกษัตริย์จากจากจากจากเยอรมนี XNUMX จาก XNUMX ขึ้นมามายกเลิกระบอบระบอบและจัดเลือกตั้งเสรี XNUMX ไล XNUMX จาก XNUMX จากจากเยอรมนี XNUMX
รัฐบาลฉายแสงการ์ตูนด้วยข้อความ““ คิงถูกฟ้าผ่าตายขณะนั่งบนโถส้วมโถส้วม” ถูกฉายที่ตึกตึกทำการของรัฐบาล 112 รัฐบาลชีวิตคนคนที่ยุโรปในประเทศไทยประเทศไทย 112 คือคือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและคน
ล้อเลียน:“ กษัตริย์กลัวคนไทยปลดพันธนาการพันธนาการจากพวกเจ้าถูก” ถูกถูกไปยังตึกที่ทำการนรนรต။ ที่ # เบอร์ลิน เราขอสนับสนุนให้คนไทยไทยมีปฏิบัติการต่อต้านการการกดขี่ข่มเหงของของพวกเจ้า
onn จะสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญล้อล้อแล้วเราเราจะเข็นมันมันไปรอบ onn onn Sonnenbichl
แสงฉายแสง Garmisch Partenkirchen မြို့တော်ခန်းမ
ผ่านกรุณาสนับสนุนพวกผ่านผ่านppp Paypal ไปไป: paypal@PixelHELPER.tv
H PixelHELPER เป็นเป็นมูลนิธิไม่แสวงกำไรกำไรวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในโลกโลกโดยโดยในในเรื่องเรื่องเรื่องมนุษยมนุษยมนุษย P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P ที่ที่ที่ P XNUMX ix P P P ชน XNUMX ชนชนชนชน P P P XNUMX ဆယ်လ။
พวกเราจะยังคงรณรงค์ต่อไปในหลากหลายรูปแบบซึ่งรวมทั้งการรวบรวมลายชื่อพลเมืองในท้องถิ่นที่ต่อต้านกษัตริย์คนนี้ซึ่งขณะนี้ได้มีนักกิจกรรมจากองค์กรเราหลายคนได้เดินทางไปรวบรวมรายชื่อประชาชนในจากบ้านเรือน เมืองนี้นี้มีมีอีกหลายหลายกิจกรรมที่พวกพวกจะดำเนินดำเนินต่อไปไปเราเราเราเราประท้วงประท้วงประท้วงประท้วงประท้วงต่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมืองเมืองได้เมืองเมืองเมืองเมือง XNUMX ประท้วงประท้วงประท้วงก็ประท้วงเมื่อเมื่อประท้วงประท้วงเมื่อกษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์เมือง XNUMX ได้เผชิญหน้าและประท้วงประท้วง XNUMX ประท้วงประท้วง เกิดชาชนของตัวเองเองที่บ้านเกิด
กิจกรรมฉายคำประท้วงที่ที่โรงแรมเดอะแกแกรนเมื่อคืนคืนเป็นเพียงกิจกรรมแรกแรกของพวกเราเราเพื่อเพื่อกดดันกดดันกดดันกดดันกดดันให้ให้ให้กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม XNUMX ฉายภาพเรากดดัน XNUMX เราเราเรากดดันกดดัน XNUMX ให้นี้นี้แสดงแสดงความต่อต่อกิจกรรม XNUMX เรา XNUMX
เราต้องการการการจากทุกทุกท่านคนละเล็กคนละคนละโปรดโปรดช่วยกันสนับสนุนพวกพวกเราสามารถสามารถสามารถสามารถได้ทำเราเราเราเราเราเราเราเราเราเราจากจากจากจากจากจากทุกทุกทุกทุกทุกทุก XNUMX จากจากจากจากจากจากจากจากทุก
ix คนคน ix ที่ต่อสู้เพื่อเพื่อประชาธิปไตยและและเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นได้ ix ix ix ix PixelHeLPER ที่เปิดการรณรงค์เพื่อประท้วงวชิรากรกรของประเทศไทยประเทศไทยซึ่งเป็นกษัตริย์ที่รา้รา้กลุ่ม ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix XNUMX ประเทศประเทศการสร้างความความหวาดกลัวและบนบนข่มขู่ข่มขู่คุกคามประชาชนที่กระทำกระทำบนได้ได้ได้ได้ความความความร่วมมือร่วมมือปกครองปกครองปกครองปกครองปกครองปกครองได้ปกครองสร้างสร้างสร้างปกครองสร้างสร้างสร้างสร้างความ XNUMX สร้างความความความสร้างความความร่วมมือร่วมมือร่วมมือร่วมมือร่วมมือสร้างสร้างสร้างร่วมมือสร้างความร่วมมือร่วมมือ
67 อายุ 2560 ปีผู้นี้ได้ขึ้นสู่การการราชย์เมื่อปี 20 100 เขาแทบจะไม่ได้เวลาเวลาอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยเลยเลยเป็นเป็นเวลาเวลาปีปีปีมาแล้วแล้วที่เขาเขาได้ใช้เวลาใหญ่อายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุอายุเลยเลยเลยเลยเลยเวลากษัตริย์อายุอายุอายุเลยอายุอายุนี้ประเทศไทยเลยเลยเวลา XNUMX เป็นอายุ XNUMX อายุผู้นี้นี้ได้ได้ขึ้นเลยเวลาเวลา XNUMX เวลาแล้วแล้วแล้วได้ใช้ใช้เวลาใหญ่ใหญ่อยู่เวลาในประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยเลยเลยเวลาเวลาหลายปีมาแล้วแล้วเขาได้ได้เวลาใหญ่เวลาอายุประเทศไทยประเทศไทยเวลาประเทศไทยเลยกษัตริย์กษัตริย์ XNUMX arm นบิชล์ที่เมือง arm Garmisch-Partenkirchen ในเยอรมนีเยอรมนี arm arm มที่ประกอบประกอบไปด้วยผู้หญิง XNUMX ผู้หญิงและคณะคณะข้าราชบริพารบริพารและผู้รับใช้กว่า XNUMX คน
ผู้หญิงหลายคนในฮาเรมและข้าราชบริพารในคณะผู้รับใช้ของเขาก็คือผู้ถูกกักขังที่ในประเทศเยอรมนีพวกเขาไม่ต้องการรับใช้วชิราลงกรณ์ แต่ก็ไม่มีทางเลือกแหล่งข้อมูลที่ทำงานกับกษัตริย์ที่ บาเรียกล่าวว่าว่าข้าราชบริพารที่ที่กษัตริย์ไม่พอใจจะถูกเพื่อเพื่อเพื่อลงโทษเป็นเป็นประจำประจำคนคนคนคนของของของของรักษาความปลอดภัยปลอดภัยของวชิรารา XNUMX เรียกลงโทษเป็นเป็นคนคนคน XNUMX ของความปลอดภัยของวชิราลงกรการเป็นคนวคน XNUMX คน XNUMX คนของของราราราราลงกรการลงโทษเป็นประจำคนคนของของของของบาบาบา XNUMX XNUMX วาล่าเป็นประจำคนคนของของของ XNUMX ภาพไว้เพราะว่าวชิราลงลงกรณ์ณ์ดูดูวีดีโอวีดีโอคนคนยามยามอยู่ในทึก
ในกษัตริย์ได้สร้างคุกคุกและค่ายกักกันเพื่อลงโทษลงโทษคนซึ่งตั้งอยู่ในของของของราชราชราชบริพารและนายนายนายทหารทหารทหารสามารถถูกถูกส่งไปขังยัง XNUMX คุกพวกพวกจะถูกถูกราชนายนายนายทหารทหารในใน XNUMX ในประเทศไทยในเล็กสร้างสร้างนายทหารทหารทหาร XNUMX ในขังคุกนี้พวกจะถูกคุมบริพารนายนายทหารทหารทหารถูกในในในในในในทหารทหารทหารทหารทหารในทหารทหารคุก။ ๆ พวกเขาจะถูกซ้อมทุบตีทุบตีและทรมานตามตามคำสั่งของของวชิราราลง ๆ
น้อยช่วงเวลากี่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้รับใช้ใกล้กษัตริย์ต้องต้องไปอย่างอย่างคนคน3น้อยน้อยสำนักอ้างว่าว่าว่าสองคนฆ่าฆ่าว่าตายตายและคนสามสามติดในใน XNUMX ราช XNUMX ราชสำนักอ้างว่าว่าสองสอง XNUMX ตาย XNUMX คนราชสำนักอ้างว่าว่าสองสอง XNUMX ฆ่าฆ่าและคนคนสามติดติดติดกระแสเลือดเลือด แต่ก็เป็นที่ในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในใน။ ตายทั้งสามคนถูกทรมานทรมานและถูกฆ่าตายตาย
ประเทศตั้งแต่ปี 2559 นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยชาวไทยที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศคนคนคนคนถูกถูกสังหารมีมีมีหลักฐานหนักแน่นที่หนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นว่าว่าพวกพวกเขาถูกสังหารสังหารสังหารที่ที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งจาก9XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ที่หนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นพวก XNUMX เขาปีคำสั่งมีมีသ။
ในประเทศไทยอยู่เหนือเหนือกฎหมายสามารถทำอะไรอะไรก็ได้ไม่ต้องต้องโทษทัณฑ์รัฐธรรมนูญให้อันอันอันกับกษัตริย์กษัตริย์และไม่มีใครใครใครใครใครสามารถสามารถสามารถในในในในใน XNUMX กษัตริย์ในใน XNUMX กษัตริย์ XNUMX ใครใครใครใครสามารถสามารถในในได้ได้ได้ในในในใน XNUMX XNUMX
รับการปกป้องและสนับสนุนสนับสนุนโดยนายพลพลลตรอยัลรอยัลลิแห่งแห่งไทยเช่นเช่นเดียวเดียวสถาบันสถาบันสถาบันกษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กองทัพกองทัพไทยไทยก็เป็นเป็นศัตรูระบอบระบอบได้กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์กษัตริย์။ ครั้งและเข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่างต่อเนื่องประเทศไทยจึงไม่สามารถพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าราชสำนักและทหารต่างก็สมสมรู้ร่วมคิดกันในการลดทอนอำนาจทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งวชิรามีอำนาจณ์ณ์ณ์ มากกว่าในการกำกับทหารรักษาพระองค์มากกว่ามากกว่า 12 นายให้สามารถปราบปรามผู้ประท้วงได้
2516 2519 ในประวัติศาสตร์ร่วมร่วมสมัยของประเทศไทยประเทศไทยที่สังหารสังหารหมู่ที่ประท้วงประท้วงประชาธิปไตยบนบนท้องถนนที่ที่กรุงเทพ - ในปี 2535 2553 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ชาติชาติชาติ XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX สี่สี่สี่ XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMXปี
ที่นี้วชิราลงกรณ์อยู่กับภรรยาจากการแต่งงานครั้งครั้งเขา4ที่ทอดทิ้งภรยคนแรกแรกและทำให้ทำให้ทำให้เธอเธออยู่อยู่กับความอับอายอับอายและกับกับเธอเธอที่แต่งงานแต่งงานแต่งงานปัจจุบันปัจจุบันนี้ 2539 ว 2557 เขาทอดทิ้งคนคนและทำให้ทำให้ทำให้เธอ3ทำให้กับอับอายอับอาย XNUMX เขาเขาแต่งงานที่แต่งงานกันไม่นานนานทำให้ทำให้ทำให้ทำให้။ XNUMX ไสไปจากประเทศไทยประเทศไทยพร้อมด้วยลูกชายสี่คนในปี XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX คนที่สามในในปี XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX เธอเธอกักตัว แต่ แต่ แต่ในในก็ก็ก็ก็ก็ของของโหดร้ายปี XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ปีให้ให้ให้ให้อยู่ แต่ในในบ้านก็ก็ก็ของของอย่างโหดร้ายปีปีในปีปีจากจากจากจากจากจากกักตัวในใน။ หญิง XNUMX คนรวมทั้งลุงและญาติอีกหลายคนถูกจับเข้าคุก
วชิราลงกรณ์แต่งงานกับราชีนีคนปัจจุบันเมื่อปีที่ผ่านมา แต่เขาก็แทบจะไม่ได้อยู่กับเธอเขาชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับฮาเรมที่โรงแรมแกรนด์โฮเตลซอนเนนบิ ล์ในในที่ภรภรรรยายาของเขาอาศัยอยู่อยู่ที่โรงแรมเอนเอนเกลเบิร์กเบิร์กเบิร์กชชชชลที่ที่ที่ชที่ที่ที่ภรภรที่ที่ภร XNUMX ที่
วชิราลงกรณ์เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินมูลค่ากว่า 50,000 ล้านยูโร แต่ความมั่งคั่งนั้นไม่พอสำหรับเขา - ในแต่ละปีเขาได้เรียกร้องเงินจำนวนมหาศาลจากงบประมาณแผ่นดินจากภาษีของประชาชนกษัตริย์ปีนี้นี้นี้นี้นี้ประชาชนปีปีนี้ กว่ารับเงินจำนวนกว่ากว่า ၂၉၀၀၀ ล้านบาทกว่างบประมาณแผ่นดิน”
ผู้คนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกต่างก็อยู่ในภาวะอับจนและอดอยากหิวโหยจากวิกฤตโควิด -19 ในขณะที่กษัตริย์ใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมหรูที่ชื่อแกรนด์โฮเตลซอนเนนบิชล์ถลุงทิ้งเงินภาษี ประชาชนมหาศาลและก็ก็ทำร้ายผู้หญิงในฮาเรเรและข้ารับใช้ที่ราชราชผู้รับผู้รับใช้ที่ที่ถูกทุบตีทุบตีทุบตีทำร้ายทำร้ายทำร้ายทำร้ายไม่ไม่แจ้งแจ้งความความกับตำวว XNUMX มหาศาลกลัวใช้ที่ถูกทุบตีทุบตีทุบตีทำร้าย XNUMX ทำร้ายความแจ้งกับกับตำววเยอรมันเพราะกลัวที่ทุบตีทุบตีทำร้าย XNUMX ทุบตี XNUMX ไม่มหาศาลจเยอรมันเพราะกลัวที่ที่ทุบตีทุบตีทำร้ายทำร้ายทำร้ายก็ XNUMX กล้า XNUMX XNUMX ။ ับผลกระทบไปด้วย
ไทยใหญ่ต่างต่างก็ตระหนักดีถึงถึงอาชญากรรมความโหดร้ายโหดร้ายกษัตริย์ของพวกพวกพวกต่างก็ก็ถูกถูกทำให้เงียบเงียบเงียบเงียบเสียงเสียงเสียงกฎหมายกฎหมายใครใครก็ตามก็ตามที่ที่กษัตริย์กษัตริย์ XNUMX หลายก็ถูกถูกทำให้เงียบ XNUMX เงียบเสียงเสียงกฎหมายใคร XNUMX ป่าเถื่อนที่ที่จะจะต้องทนก็ก็ถูกเงียบ XNUMX เงียบ XNUMX เสียงเงียบเสียงใครก็ตามก็ตามที่วิจารณ์กษัตริย์จะทนทนก็ถูกเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเงียบเสียงคนคนคนคนคนคนคนคนเงียบnuများသုံးလို့ရပါတယ်။
มันแค่คนไทยเท่านั้นเท่านั้นที่ต้องทุกข์ทนทนกษัตริย์วชิราลงเขาเขาเขาเป็นเป็นเป็นภาระของผู้ผู้ผู้เสียเสียเสียภาษีชาวชาวเยอรมันด้วยเพราะว่ารัฐ XNUMX ของต้องต้องค่ารักษารักษาเป็นผู้ผู้ผู้เสียเสียมันมัน XNUMX มันไม่ใช่มันทำการไทยไทยผู้เสียเสียเสีย XNUMX มันเพราะว่าของจะต้องค่ารักษาความภาระผู้ผู้เสียเสียเสียชาวมันมันมันมันมันมันเสียเสียเสียเสียเสียมันเสียเสียเท่านั้น။ มนุษยชนในดินแดนของเยอรมนีเยอรมนี - ทั้งทั้งนำพาผู้หญิงเข้ามาและทำร้ายพวกเธอทำร้ายทำร้ายข้าข้าบริพารที่ที่ที่ที่ที่รับรับการการมนุษยมนุษยมนุษยมนุษยมนุษยมนุษยการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการการรับการการการการการการการการการการการการการการการการการการการချိန်းစက်ခရင်မ်များ။ เองอดทนยอมให้พฤติกรรมเหล่าเหล่านี้เกิดขึ้นในในประเทศของตัวเองเอง
ix คือเหตุผลว่าทำไมนักนักกิจกรรมชาวไทยสนับสนุนองค์กร ix PixelHELPER ในการทำแอคชั่นนี้
และเราจะจะหยุดการการรณรงค์จนกว่าเขาเขาจะถูกส่งกลับกลับเกิดเกิดเพื่อเพื่อสู่กระบวนการกระบวนการกระบวนการกระบวนการและและและและและและและและและกระบวนการหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดการหยุดหยุดการการ XNUMX หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดการการการหยุด
ix คุณสนับสนุนเราโปรดช่วยช่วยเผยแพร่ข้อความและและร่วมสนับสนุนการรณรงค์ ix ix ix PixelHELPER ได้ที่เวบบไซด์ https://pixelhelper.org/en/hilfe/
เมื่อเราสู้กันเราเราจะสามารถหยุดหยุดรัชสมัยที่ปกครองด้วยความกลัวของชิชิชิชิกรกรกรณ์กรได้ณ์ได้และและและเมื่อเมื่อเมื่อ XNUMX เรากรเมื่อกรกรณ์กรณ์ XNUMX กรกรและและและและและเมื่อเมื่อประเทศไทย XNUMX XNUMX XNUMX กร XNUMX
กองทุนพิทักษ์ประชาธิปไตยไทย - เรายกเลิกระบอบราชาราชาธิปปไตยในประเทศไทยประเทศไทย ဧပြီလ 14th, 2021အိုလီဗာ Bienkowski
ထိုင်းဒီမိုကရေစီကာကွယ်ရေးရန်ပုံငွေ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိဘုရင်စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည် ဧပြီလ 14th, 2021အိုလီဗာ Bienkowski
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 12 ။ မတ်လ 2018
#PixelHELPER ဒယ်ဖနီ Caruana Galizia ၏လူသတ်သမားများ၏ကျောထောက်နောက်ခံများ၏ဖမ်းဆီးခြင်းမှဦးဆောင်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်€ 100,000 ချီးမွမ်း။ pixelhelper.org/en/donate မှာ campaign ကိုထောကျပံ့ပေးပါ
"အခြားသူများ၏အသွေးဖြင့်ရေးသားထားသောစာတမ်း" - ထိုအရာကိုအမေရိကန်သမိုင်းပညာရှင်မိုက်ကယ်ဒေးဗစ်ကကားဗုံးဟုခေါ်သည်။ နောက်ဆုံးပြသမှုများတွင်ပလတ်စတစ်ပေါက်ကွဲမှုဟုခေါ်သည့် Semtex ပါဝင်သည်။ Bidnija ရှိအဖြူ Peugeot 108 ၏ကြမ်းပြင်နှင့်ကပ်လျှက်ရှိပြီးမြို့တော် Valletta အနောက်ဘက် ၁၁ မိုင်အကွာတွင်နေထိုင်သူ ၃၀၉ ယောက်ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင်အသက် ၅၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော Daphne Caruana Galizia သည်သူမ၏ကားဘီးနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ သူသည်ကျောက်စရစ်လမ်းမကြီးသို့အဓိကကျသောလမ်းကိုမောင်းနှင်သည်၊ လက်ဝဲဘက်လှည့ ်၍ ပင်လယ်၏ဝေးကွာသောအရောင်တောက်တောက်ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည့်တောင်ကုန်းသို့လှည့်လည်သွားလာရာတောရိုင်းမြေဖို့ခြင်းနှင့် zucchini စိုက်ခင်း ၂၇၀ ကိုက်အကွာမှအနီရောင်နိမိတ်သို့ သော hedgehog သည်သူ၏ညီမျှပြားစေဖို့မယာဉ်မောင်းကမေးတယ်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏ယုံကြည်ချက်အရမိုဘိုင်းဖုန်းမှဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ နာရီ ၁၅.၀၄ နာရီတွင် Peugeots ၏ရုပ်အလောင်းများသည်လမ်းမပေါ်တွင်ရှိသောမြေပြင်ပေါ်တွင်မီတာ ၁၀၀ အကွာတွင်ရှိသည်။ သုံးရက်အကြာတွင် Valletta's Mater-Dei ဆေးရုံ၌ Galizia ၏အလောင်းကိုစစ်ဆေးသောဒတ်ခ်ျမှုခင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ခုနစ်ယောက်သည်မြင်တွေ့ရန်သိပ်မလွယ်ကူပါ။ တိုင်းပြည်၏လူသိအများဆုံးနှင့်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဆုံးသတင်းစာဆရာ၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ကျန်ရှိနေသည်။ သူမမသေဆုံးမီ ၂၉ မိနစ်တွင်သူ၏နောက်ဆုံးစကားများကိုသူမဘလော့ဂ်တွင်ဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေလူလိမ်တွေနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ ဒါဟာစိတ်ပျက်အားငယ်ဖို့ပါပဲ။
တစ်ပါတ်အကြာတွင် Galicia ၏သားသုံးယောက်သည် Strasbourg ရှိဥရောပပါလီမန်တွင်ရောက်ရှိနေပြီးသူတို့၏မိခင်အားသတ်ဖြတ်မှုသည်မော်လတာနှင့် EU တို့အကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ Green MP Sven Giegold ကမိုက်ကရိုဖုန်းကိုယူသည်။ "Daphne လမ်းပေါ်မှာသေဆုံးခဲ့သည်။ ပုန်းခိုစရာနေရာမရှိဘူး၊ သူတို့ရဲ့လူသတ်သမားတွေကတိုက်ခိုက်မှုကိုမတော်တဆဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တောင်မကြိုးစားခဲ့ကြဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၎င်းသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအာဏာကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဗုံးသည်ရဲအရာရှိသို့မဟုတ်ရှေ့နေချုပ်၏ကားအောက်တွင်မရှိရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် - "မော်လ်တာရှိငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်းနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများစနစ်ကိုအလင်းဖြာပေးသောဒယ်ဖနီကထိုအာဏာပိုင်များမဟုတ်ပါ"
Strasbourg ၌ကျင်းပသည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုပြုလုပ်နေစဉ်အီတလီဆန့်ကျင်ရေးမာဖီးယားဆန့်ကျင်ရေးကော်မရှင်အကြီးအကဲ Rosy Bindi သည် Excelsior ဟိုတယ်သို့ Valletta ရိုးတံများထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ ကော်မရှင်သည်မော်လတာကျွန်းတွင်ရက်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရသည်၊ ခရီးစဉ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်ဘလော့ဂါလုပ်ကြံခံရပြီးနောက်စိတ်ဝင်စားမှုကြီးမားသည်။ ချောချောမွေ့သောကိုယ်ရံတော်များ ၀ န်းရံထားသောအဝတ်အစားများသည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောကေဘယ်ကြိုးများတပ်ဆင်ထားသည့်ဘင်ဒီသည်စားပွဲတစ်ခုတွင်ထိုင်။ မိုးသည်းထန်စွာသားရေကုလားထိုင်များ၌စောင့်ဆိုင်းနေသောဂျာနယ်လစ်များကိုကြည့်သည်။ မာဒီမာဖီးယားဂိုဏ်းသည်ဘီဒီကမော်လ်တာအား“ အနည်းငယ်သာပရဒိသု” အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ထို့အပြင်“ မော်လ်တာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွင့်လှစ်ရန်ကမ်းလှမ်းသောဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ” သည်လည်း“ ပြtheနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု” ဖြစ်သည်။
မော်လ်တာအတွက်ဘင်ဒီ၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည်ပြaနာဖြစ်သည်။ သူမဟာအီတလီမာဖီးယားဂိုဏ်းကိုကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီးသူမ၏စကားလုံးသည်အလေးအနက်ရှိသည်။ ဂါလီစီကိုလုပ်ကြံခံရချိန်ကတည်းကမော်လတာသည်၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းအတွက်တိုက်ခိုက်နေသည်။
သူမ၏၏လူသတ်မှုအဖြစ်အများအပြားရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. အလေးအနက်ဘယ်သူသူများသည်မရှိတော့မော်လ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သေချာခဲ့ဘူးသောအရာကိုတစ်ဦးစာတမ်းတွင်အဆိုပါအိုက်စလန်ပေါ်မှာကြည့်ရှုပါ။
Giegold သည်အခွန်ရှောင်တိမ်းမှုတွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာပါ ၀ င်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး Galizia ၏သုတေသနကိုသိသူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကိုစေလွှတ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ သူကဆိုရှယ်လစ် ၀ န်ကြီးချုပ်ဂျိုးဇက် Muscat ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဥရောပပါလီမန်သည်“ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေး” အတွက်မော်လ်တာသို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စေလွှတ်ရန်လိုလားသည်။
အဲဒီလိုမြင်တာကိုသူမတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဤနေ့ရက်ကာလကိုကျွန်းပြည်နယ်တွင်သတင်းပို့ပါကလူမည်းငွေများကိုအက္ခရာစာလုံးတွဲကုမ္ပဏီများ၊ အခွန်အကောက်များ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်မှောင်မိုက်သောဆက်သွယ်မှု၊ ရေနံမှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှု၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းများအကြောင်းပြောဆိုသည်။ Galizia ၏အကြီးကျယ်ဆုံးသမိုင်းသည်လည်းဤအချက်ကိုအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ သူမ၏သား Mathew သည် ၂၀၁၆ ပနားမားစာတမ်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့် IJIC သုတေသနကွန်ယက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သူနှင့် ပတ်သက်၍ Galizia သည်မော်လတာနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုရရှိခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးချုပ် Muscat ၀ န်ကြီးချုပ် Keith Schembri နှင့်ယခုခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာနဖြစ်သောပထမဆုံးစွမ်းအင်၊ သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Konrad Mizzi သည်ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုများနှင့်ပနားမားရှိအဖုံးကုမ္ပဏီများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုသူမရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ယခုအခါမှောင်မိုက်နေသောပုံရိပ်တစ်ခုသို့ပေါင်းစည်းလျက်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်နိုင်ငံရေးသမားများ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အငြင်းပွားနေသောပြည်သူ့ဘဏ္revenueာငွေစီး ၀ င်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောရာဇ ၀ တ်မှုများသည်နယ်နိမိတ်များပြိုကွဲသွားပုံရသည်။
စီးပွားရေးသမားများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများပါ ၀ င်သော Valletta မြို့ဆင်ခြေဖုံးနှင့်ကားမပါသောသဲအရောင်အဟောင်းမြို့နှင့်မတူဘဲကိုးပတ်အတွင်းဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏မြို့တော်ဖြစ်လာလိမ့်မည် - ၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောပွင့်လင်းသောအလယ်ခေတ်ပြတိုက် သောင်းနှင့်ချီသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား the ည့်သည်များသည်သူတို့၏စံသတ်မှတ်ချက်အရခရူးဆိတ်စစ်သည်များ၊ ပန်းချီကားများနှင့်အတူလမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာကြသည်။ ထို့နောက်ညနေခင်း၌စိန့်ဂျူလီယန်ရှိပင်လယ်အော်၏အခြားတစ်ဖက်ရှိရေမှုန်ရေမွှားများ၊ Cisk စခန်း။
သူတို့ထဲကတချို့ဟာ Jonathan Jonathan ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ Galizia သေဆုံးပြီးနောက်ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌သူသည် Westin Dragonara ၏ lob ည့်ခန်း၌အပြာရောင်ဝတ်စုံဖြင့်မျက်မှန်ပါးလွှာ။ ထိုင်သည်။ ဖန်မျက်နှာပြင်၏နောက်ကွယ်တွင်လှိုင်းများသည်ကျောက်တုံးများကိုထိမှန်သည်။ Ferris သည်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်၏လုံခြုံရေးအကြီးအကဲဖြစ်ပြီးမော်လ်တာတွင်အခြေအနေများမှာမဖြစ်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတည်းကကူးတို့ရဲအရာရှိဟာငွေခဝါချမှုအတွက်တာဝန်ရှိတယ်။ Galizia ၏ဘလော့ဂ်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင်ကူညီခဲ့သည် သူမကကျွန်မတို့မသိတဲ့အရာတွေကိုသူသိတယ်။ လူများသည်ရဲအရာရှိများကဲ့သို့စာနယ်ဇင်းသမားများကိုပိုမိုယုံကြည်ကြသည်။ “ ကူးတို့ကူးတို့ဟာဂျာမနီ၊ တရုတ်၊ ဘရပ်ဆဲလ်မှာပညာတတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်ပြီး၊ ကဒါဖီရဲ့စာရင်းကိုင်ကို ၂၀၁၆ နို ၀ င်ဘာလမှာမော်လတာငွေကြေးခ ၀ ါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (FIAU) ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းအစိုးရအရာရှိများအပေါ်အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်အစီရင်ခံစာများကိုရေးသားခဲ့သည်။ အားလုံးသည် Ferris က Galizia ၏သုတေသနအပေါ်အခြေခံသည်။ ဘယ်သူ့ကိုသူနောက်လိုက်ချင်သလဲဆိုရင်သူအသေးစိတ်ကိုသိရင်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်။
FIAU စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအနှစ်ချုပ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကက်ဘိနက်အကြီးအကဲ Keith Schembri သည်ယူကရိန်းငွေ ၁၀၀,၀၀၀ ကိုရုရှားသို့ရောင်းချခြင်းမှရရှိသောယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ကိုဖုံးကွယ်ရန်ကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးချုပ် Keith Schembri သည်သူ၏စာတိုက်ပုံးကုမ္ပဏီကိုသုံးခဲ့သည်။ မော်လ်တာသတင်းစာမန်နေဂျာအားလည်းသူသည်ယူရိုသန်းတစ်ဝက်ကိုလာဘ်ထိုးခဲ့သည်။ Ferris က Schembri သည်အစိုးရ၏သတင်းစာကိုအလေးထားစောင့်ကြည့်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူသည်စက္ကူသည်သူမထံမှစက္ကူကိုဆက်လက်လက်ခံရရှိရန်သေချာစေလိုခဲ့သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဒုတိယအနေဖြင့် Schembri သည်စက္ကူလက်ကားရောင်းသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရှီဘရီနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဟောင်း Konrad Mizzi တို့သည်ဒူဘိုင်းမှမော်လ်တာတွင်ဓာတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်သောကုမ္ပဏီထံမှလာဘ်ယူသည်။ ထိုငွေများကိုသူတို့နှစ် ဦး ၏စာတိုက်ပုံးကုမ္ပဏီများသို့လည်းစီးဆင်းခဲ့သည်။ Galizia ၏ "နေရာတိုင်းမှာလူလတ်တန်းစားများ" ၏ဘလော့ဂ်ဂါသည်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဓါတ်ငွေ့ကန်ထရိုက်များအတွက် 1.07 ယူရိုသန်း?
Schembri နှင့် Mizzi တို့ကအရာရာတိုင်းကိုငြင်းပယ်ကြသည် လူအများကမော်လ်တာနိုင်ငံရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်စေသည်။ FIAU ၏အစီရင်ခံစာများကိုအာဏာပိုင်များကသော်လည်းကောင်းရဲတပ်ဖွဲ့သို့သော်လည်းကောင်း၊ အာဏာပိုင်များကတိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်းပေးပို့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့မှာအကျိုးဆက်မရှိဘူး။
Ferris၊ သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Charles Cronin သို့မဟုတ် FIAU အကြီးအကဲဟောင်း Manfred Galdez တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဘယ်သူမှရုံးမှာမရှိတော့ဘူး ဂါလ်ဒက်စ်သည်အစောပိုင်းအငြိမ်းစားယူခြင်းခံရသည်။ ၂၀၁၇ ဇွန် ၁၆ တွင်သူ၏ဆက်ခံသူ Ferris နှင့် Cronin တို့သည်သူတို့၏စာတွင်ပါသောအဖြူရောင်စာအိတ်ကိုဖိ။ ထားခဲ့သည်။ “ အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာဆေးတွေနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်တယ်။ FIAU က Ferris နှင့် Cronin အားစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းပြချက်များဖြင့်ထုတ်ပယ်ရန်မှာ၎င်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သူဟာ FIAU နဲ့အတူနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာ Galizia ရဲ့နောက်ဆုံးသမိုင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ Ferris ကဆိုပါတယ်။ ၎င်းသည်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး Michelle Muscat အကြောင်းဖြစ်သည်။ မော်လ်တာနှင့်အဇာဘိုင်ဂျန်သည် ၁၈ နှစ်တာကာလအတွင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်ရေးအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်တွင်ပနားမားရှိသူတို့၏ကုမ္ပဏီ Egrant ၏အကောင့်သည်အဇာဘိုင်ဂျန်မှယူရို ၁.၀၇ သန်းသို့စီးသင့်သည်။ “ သူတို့ကဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုတားဆီးချင်တယ်။ သူသည်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအာဏာကိုတရားစွဲခဲ့သည်။
FIAU အစီရင်ခံစာများကိုပင်လူသိများသည်မှာသူသည်မိမိကိုယ်ကို“ နိုင်ငံရေးတွင် Daphne ၏အဆွေတော်” ဟုခေါ်ပြီးသူတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ် ဦး ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Simon Busuttil သည်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏တစ်ခုတည်းသောအတိုက်အခံပါတီဖြစ်သည်။ ယူအက်စ်ရုပ်မြင်သံကြားတရားဟောဆရာတစ် ဦး ၏စတိုင်နှင့်အသံဖြင့်လူတစ် ဦး၊ သူ၏ဘုရားကျောင်းများသည်ရင်ဖုံးပေါ်၌အနက်ရောင်စိတ်မသာညည်းတွားသောဇာများတပ်ဆင်ထားကြသည်။ သူကပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော့်ဖုန်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ " Valletta လမ်းလျှောက်သူလမ်းပေါ်မှာပျံဝဲနိုင်သည့်ငါးမွေးကန်ကဲ့သို့သောနေရာရှိပါလီမန်၏အိမ်များရှိအတိုက်အခံများ၏ကွန်ဖရင့်ခန်း၌ည့်သည်များကိုကြိုဆိုကြသည်။
Galizia သည်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်သောပစ္စည်းများပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ ၀ န်ကြီးချုပ်မူစတ်ကရွေးကောက်ပွဲများကိုပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လတွင်ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ Busuttil သည်အတိုက်အခံများ၏ထိပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကသူ့ကို FIAU သတင်းပို့တယ်။ Busuttil သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသတင်းစာများ၏ရှေ့မှောက်၌ ၀ မ်းမြောက်စွာဖြင့်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မကူညီခဲ့ပါ - မောလ်တို့သည်မူဆတ်အပေါ်သစ္စာရှိခဲ့ ဘူတိုတယ်လ်သည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးမော်လ်တာ၏စီးပွားရေးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ “ အဲဒီနောက်မှာငါနိုင်ငံရေးကနေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ခွာချင်ခဲ့တယ်။ "ဒါပေမယ့်အခုသူမသေဆုံးပြီးနောက်မှာတော့အရာအားလုံးကကွဲပြားနေပြီ။
ဇူလိုင်လတွင် Busuttil သည်ဝန်ကြီးများအားစစ်ဆေးရန်ရဲကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Schembri နှင့် Mizzi တို့ကကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ “ ငါဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင် Strasbourg ကိုသွားမယ်။ Galizia ရဲ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ချင်တယ်။
ဘလော့ဂါသည်အစိုးရ၏ကျန်အစိုးရနှင့်အတိုက်အခံအင်အားစုများအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အာဏာရပါတီ၏ဌာနချုပ်မှသူတို့၏အဆိုးဆုံးရန်သူများပင်ပြောဆိုသည့်အတိုင်း“ တောက်ပသောဆောင်းပါးများ” နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝအကြောင်းကိုစာသားများနှင့်အတူ။ သို့သော်မော်လ်တာရှိမည်သူမျှသူမ၏ကားအောက်ဗုံးကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်းသည်နိုင်ငံရေးသမားများဖြစ်သည်ဟုအလေးအနက်ယုံကြည်ကြသည်။
မော်လ်တာနှင့်အီတလီတို့တွင်အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိသောသီအိုရီမှာ Galicia သည်လစ်ဗျားမှဥရောပတောင်ပိုင်းသို့ရေနံမှောင်ခိုတင်ပို့ရန်မာဖီးယားဂိုဏ်း၏ကြိုးပမ်းမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဤယူဆချက်ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းမော်လ်တာတွင်ကားဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုငါးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရာဇ ၀ တ်သားများမှကျူးလွန်ခံရသူများဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ Semtex ကိုသုံးတိုင်းအချိန်တိုင်း။ ၎င်းကိုဥပမာအားဖြင့်မှောင်ခိုတင်သွင်းသောဆီမှလစ်ဗျား Zuwara တွင်ထုတ်လုပ်သည်။
အတိုက်အခံ uninvolved မဟုတ်ပါဘူး
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ မော်လ်တာရှိလူအများစုက Muscat သည် Galicia သေဆုံးခြင်းနှင့်နုတ်ထွက်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဲတွေဟာ Galizia ကိုအကာအကွယ်မပေးလို့ပါ။ တကယ်တော့ဘလော့ဂါဟာရဲရဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့တယ်၊ Galizia ၏မိသားစု၊ အတိုက်အခံနှင့်မော်လ်ဒိုက်ဂျာနယ်လစ်များအပေါ်စွပ်စွဲချက်များကိုခုခံကာကွယ်။ MEP Busuttil က“ အကျင့်ပျက် ၀ န်ကြီးများ ၀ န်ထမ်းများတာ ၀ န်ယူထားသရွေ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုသင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ” သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသည်းခံနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်သည်အင်စတီကျူးရှင်းများအားနည်းနေသည်။
သို့သော်အတိုက်အခံသည်အခြေအနေများတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ မော်လတာသည်စီးပွားရေးအရအလွန်အမင်းကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအခွန်များ၊ အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောနိုင်ငံခြားသားများအားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရောင်းချခြင်းအပေါ်အလွန်အမင်းအားထားနေရသည်။ Busuttils PN ကအထောက်အကူပြုသည်။ “ မော်လ်တာကသူ့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုညစ်ပတ်တဲ့ငွေနဲ့ရောင်းလိုက်ပြီ” ဟုဂရင်းဂျီဂိုလ်ကဆိုသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုနိုင်ငံရေးနှင့်ဘဏ္elာရေးဆိုင်ရာအထက်တန်းလွှာများအကြားအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းတို့ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။
မော်လ်တာအတွက်စိန့် Julian ၏လောင်းကစားရုံမြို့အတွက် Mayfair ရှုပ်ထွေးသည်, အိုက်စလန်ပေါ်တွင်များစွာသောရုံးအဆောက်အဦ၏တဦးတည်းရပ်တည်
ဒယ်ဖနီ Caruana Galizia မတ်လ 12th, 2018အိုလီဗာ Bienkowski
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 24 ။ မေလ 2017
ဂျာမနီဥပဒေများကိုသူလျှိုလုပ်ခြင်းနှင့် #Kurdistan ရှိစစ်ပွဲဟောပြောခြင်းအတွက်သူ၏လက်၌ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားသောနိုင်ငံရေးအစ္စလာမ္မစ်များအပေါ်တားမြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ Light Art #Karikaturen DITIB အလယ်ပိုင်းဗလီ - Cologne #Moschee #Deutschland ရှိအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးဗလီအသင်းသည် #DITIB သည်တူရကီဘာသာရေးဗျူရို #Diyanet နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ သာသနာရေးရာသဘာပတိကသင်၏ #Imane လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ၀ င်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်း“ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများ” ကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်။ တူရကီနိုင်ငံသည်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီသူလျှိုလုပ်နေသည်။
၁။ NY - A.ရိယာအေအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် #Putschversuch ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင်၎င်း၏ရာထူးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ (... ) 1rd RA: #Moscheegemeinde ၏ဘုတ်အဖွဲ့မှအာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုနောက်သို့လှည့်ပါ။ #Zeitung #Zaman ၏စာရေးဆရာဟောင်း AA ကိုဖမ်းဆီးရန်အမိန့်တောင်းဇီဝဗေဒတူဖြစ်သည်။ #Spendensammlungen တွင်ဤတည်ဆောက်ပုံကို #Opferfest တွင်ကစားသည်။ (... ) 15. တီအီး။ ဤနေရာတွင်လေ့လာစဉ်ကသူသည်ဤအဆောက်အအုံကို #Wohnheimen တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး #Braut အဖြစ် #Deutschland သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကစုပေါင်း # ဖွဲ့စည်းပုံ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်အမှန်တကယ်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုလိုလားသင့်သည်။
"ဒီနာမည်တွေကိုဇူလိုင် ၁၅ ရက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မကြာခင်မှာပဲတချို့လေ့လာသူအသိုင်းအဝိုင်း ၀ င်တွေကအရည်အချင်းရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်ပရှိတူရကီမစ်ရှင်တွေဆီရောက်သွားတယ်"
အစွန်းရောက်အစ္စလမ်ဆန့်ကျင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ဖေဖော်ဝါရီလ 19th, 2018အိုလီဗာ Bienkowski
အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ၏မိန်း Kampf ၏ Donald Trump အထူးထုတ်ဝေ
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 19 ။ အောက်တိုဘာလ 2016
အယောင်ဆောင်ပြီးမိန်း Kampf စကားလုံးများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အစားထိုးခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်
စာအုပ်အဟောင်းတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစကားလုံးများကိုလဲလှယ်ခြင်းအားဖြင့်အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ၏“ Mein Kampf” ဗားရှင်းအသစ်ကို Donald Trump နှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်များအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ယခုစိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိသည်နယူးယောက်ရှိကလေးငယ်တစ် ဦး မှအမေရိကန်စီးပွားရေးသမားနှင့်နိုင်ငံရေးသမားဆီသို့ Trump ၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သည်။ ဒီအပြိုင်ပုံပြင်မှာတော့ Trump 2016 ခုနှစ်မြူးနစ်မှာဟစ်တလာရဲ့ Feldherrenhallen အာဏာသိမ်းမှု၏ဆင်တူ, 1923 ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်အာဏာသိမ်းမှုစတင်သည်သူအဖမ်းခံရခြင်းနှင့်အများဆုံးလုံခြုံရေးအကျဉ်းထောင်သို့ပို့သည်, သူ့ရီပတ်ဘလီကန်ထောက်ခံသူများအများအပြားဟာပါလီမန်အဆောက်အနှင့်အိမ်ဖြူတော်များ၏ရှေ့မှောက်၌လဲ .. .. သူ အမေရိကန်အမျိုးသားရေးပါတီကိုလူမျိုးရေးနှင့်ဘာသာရေးသန့်စင်ခြင်းအတွေးအခေါ်များကို အခြေခံ၍ မက္ကဆီကန်၊ မွတ်စလင်များနှင့်သူတို့၏အမျိုးသားရေးအမြင်ကိုခြိမ်းခြောက်သူများမှဖန်တီးသည်။
Trump ၏ရှုထောင့်မှ“ Mein Kampf” ဗားရှင်းအသစ်ကိုရေးသားရန်မှာ Trump နှင့် Hitler တို့နှစ် ဦး စလုံးတိုးတက်စေသောအတွေးအခေါ်များနှင့်တူညီမှုကိုပိုမိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန် (၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များနှင့်ယနေ့)၊ ကွဲပြားသောတိုင်းပြည်တစ်ခု (ဂျာမနီနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) နှင့်ရန်သူ (ဂျူးများနှင့်မူဆလင်များ) ကွဲပြားသော်လည်း၊ ထိုသဘောတရားများသည်အတူတူဖြစ်သည်။ Trump သည်သူ၏မိန့်ခွန်းများနှင့်တွစ်တာများမှတဆင့်သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးသည်အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာကြီးအတွက်အန္တရာယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
အမေရိကန်သမ္မတသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများသာမကကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိလူများအားလုံးအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများစွာရှိသည်။ Trump ဥက္ကpres္ဌသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကူး။ မရနိုင်သောဆိုးညစ်ယုတ်မာသည့်အရာကိုဆန့်ကျင်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်စိတ်စွန်းကွက်မှု၏အစကိုမှတ်သားနိုင်သည်။ ဤနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော "Mein Kampf" ၏ဗားရှင်းသည် Trump နှင့်ဟစ်တလာအကြားရှိမျဉ်းပြိုင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါက PixelHELPER သည်အမေရိကန်ပြည်သူများအတွက်အရေးကြီးသောသတိပေးချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့သည်။
အမေဇုံအပေါ်စျေးနှုန်းတစ်ဦးချင်းစီကိုအကြှနျုပျတို့မှတစ်ဦးသင်္ကေတလှူဒါန်းမှုများအတွက်စာအုပ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ, $ 0.99 ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရရှိသောလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများကူညီလုပ်ဆောင်ကတော့ pixel အကြိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလှူဒါန်းမှုပြီးနောက်ကျနော်တို့က e-mail ဖြင့် * အ EPub format နဲ့သင်စာအုပ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ e-mail လိပ်စာ၌သင်တို့၏လှူဒါန်းမှုပေးပါ။ ဒေါင်းလုပ်: သင်ရိုးရှင်းစွာသွားရောက်ကြည့်ရှုပါကလုပျနိုငျ
အဆိုပါ pixel ကူညီအနုပညာရှင်စုပေါင်းခြင်း, Freemasons ၏စံနမူနာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းလူနည်းစုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေန်းကျင်စိတ်တွင်မြင့်မားသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့, အန္တရာယ်အကြောက်ကင်း, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံ, လမ်းလျှောက်ကမ္ဘာကြီး၏ဆူညံသံများကဒါပေမဲ့တွေဝေ။
ဘဏ်: GLS အဝန်းဘဏ်
အကောင့် Holder: Pixel ကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ non-profit အဖွဲ့အစည်းက
အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ၏မိန်း Kampf ၏ Donald Trump အထူးထုတ်ဝေ အောက်တိုဘာလ 23rd, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski Posted in, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး permalink
Campagna နှုန်းဈ diritti umani
31/05/2016 Proiezione -“ ဒါအိမ်မှာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု”
နရီစညျးနှုန်း la votazione del parlamento tedesco, pixels ကိုကူညီဟက်တာ proiettato le လြှို့ဝှကျစကား "လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု" တွင် Giustoe", Aghet" assieme ကြော်ငြာ un treno che ottomano Deporta degli armeni အားလုံးစကားပုံ immagini dell'Olocausto, sul retro del Palazzo del governo tedesco ။ Visto che l'oraeambasciata turca protetta ဝိန်း Fort Knox, abbiamo deciso di illuminare il Palazzo della Cancelliera လာကြ၏။
Quest'azione di protesta riguarda l'espulsione ed assassinio di fino တစ် 1,5 milioni di armeni, aramei, Assiri ei cosiddetti greci pontici, che risiedevano nell'allora Impero Ottomano ။ Come ဆက်ခံ all'Impero Ottomano, la Turchia deve ammettere che le atrocità commesse, nonostante le negazioni ripetute, sono un genocidio ။ အာဒိုဂန် ei suoi camerati ritengono che l'uso del Terminator genocidio SIA Turchia all'odierna un attacco ။
pixel ကူညီဟက်တာ pubblicato ဈ versi della poesia di Boehmer လူကို autorizzati Dal Tribunale di Amburgo, proiettandoli di front all'ambasciata Turca ။ Noi per, #Erdogan E esattamente #Hitler all'inizio del suo regno del အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုနဲလ် 1933 လာကြ၏။ ငါ #dittatori Meritano di essere provocati con Dell ရုပ်ပြောင် dagli artisti ed attivisti dei diritti umani ။
Pensiamo che SIA completamente legittimo paragonare gli Inizi del စစ်အစိုးရက di ဟစ်တလာ, con altri che oggi အာဏာရှင်အီးဘုရင်စနစ် governano il မန်းဒ။ Noi နှုန်း, ကိုယ် capi di stato dell'Arabia Saudita, ကာတာ, အိုမန်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှ Arabi Unity အီး sono ဘာရိန်းဟစ်တလာလာ esattamente ။ Tutti questi ခေါင်းဆောင် attuali sostengono il lavoro schiavo ဗိုလ်မှူးကြီး sistema "kafala" grazie အယ်လ် quale ဈ passaporti dei lavoratori sono confiscati ။ per questo E loro di vietato abbandonare il paese senza il consenso dei loro Datori di lavoro ။
così Medio Oriental အတွက် che le funzionano ဘုရင်စနစ် assolute အီး '' ။ si Basano sulla sorveglianza စုစုပေါင်း sessismo အီးbrutalità။ သည် L'Olocausto resta UNO dei Capitoli della storia dell'umanitàpiù brutti ။ Tuttavia, le azioni disumane sono tra le peggiori အကျပ်အတည်း umanitarie che နဲလ်မန်းဒ stanno avvenendo, အာရေဗျ Saudita, Turchia အီး altrove အတွက် Dai nostri cosiddetti alleati ကျူးလွန်။
la nostra campagna contro questi အာဏာရှင်အီးဘုရင်စနစ် sostiene ဈ diritti umani ed il rilascio di prigionieri politici ။ il Paragon tra questi ခေါင်းဆောင်ကeဟစ်တလာ E un importante promemoria, di cosa potrebbe succedere se il မန်းဒမဟုတ်တဲ့ combattesse contro di loro ။
la nostra proiezione ဟက်တာ attirato l'attenzione dei မီဒီယာ internazionali အီးဟက်တာ fatto Si che Quest Questioni umanitarie molto importanti မဟုတ်တဲ့ venissero dimenticate ။ Condividete ဈ progetti su Facebook ကို nostri! se sostieni la nostra causa, saremo molto di အငြင်းပွားဖွယ် ricevere donazioni, che ci permettano di continuare le nostre campagne ။ Anche pochi ယူရို potrebbero ခ la differenza! Sostenete il nostro lavoro!
ဘဏ်: Sparkasse Magdeburg
[gallery_bank type = "images" format = "ပန်းရန်" title = "true" desc = "false" responsive = "true" display = "all" sort_by = "pic_id" animation_effect = "bounce" album_title = "true" album_id = " ၁၀″]
ရေဒီယိုကetelevisione အဖြစ်အစီရင်ခံစာကိုဗီဒီယို
ကာတာနိုင်ငံရှိ Coppa del Mondo နှုန်းအနိမ့်ဆုံး 1,8 မီလီယံရှိသော“ schiavi moderni” သည် PixelHELPER အနုပညာဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူသိများသောအနုပညာ၊ အနိုင်အထက်လုယူခြင်း၊ Coppa del Mondo မှရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်း Tuttavia, è cambiato nulla မဟုတ်ပါ။ လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းသည်လူမှုရေး၊
“ စနစ် - ကဖေး” စနစ်သည်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ငါတစ် ဦး တည်း lavoro spesso ritirano ငါ passaporti dei loro dipendenti အီး glieli riconsegnano တစ်ကိုယ်တော် scadenza del contratto ။ ဒေသတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက်အပြောင်းအလဲလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများ, aziende, senza dover chiedere il loro consenso ။ “ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်စုံတစ်ရာသောအလုပ်မလုပ်နိုင်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အခွင့်အလမ်းများရှိနေသည်။ ” ဂျာမနီရှိလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Die Die Zeit မှ Regina Spöttlမှကာတာနိုင်ငံသည် Ha detto l'esperta del Qatar ဖြစ်သည်။
နာဇီလက်အောက်ငယ်သားစုစည်းမှု၊ ကာတာနိုင်ငံသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မှု၊ အ ၀ တ်အထည်များ၊ လူ ဦး ရေစုစုပေါင်း၏ ၈၈% ရှိပြီးနိုင်ငံအလိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ 88 mondo Coppa del mondo အရှိန်အဟုန်အရှိန်အဝါကိုကြည့်ရှုခြင်း, piccolo stato, compresa l'intera costruzione ဒီဂရီစင်တီမီတာ, အသီးအသီးပျံသန်းမှုအခွင့်အလမ်းများ, piccolo stato, compresa l'intera costruzione degli အားကစားကွင်း 2022 ။ အစဉ်အလာအတိုင်းမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။
ဗီဒီယိုကို della campagna အီး apparizioni ရုပ်မြင်သံကြား | ဂျာမန်လှိုင်း, RT ကို |
Condividi ဈ progetti su Facebook ကိုအီးတွစ်တာ nostri! se sosterrete la nostra causa, qualsiasi donazione Sara più che gradita, cosicché possiamo continuare senza sosta le nostre campagne ။ Anche un paio di ယူရို la differenza fanno! မျှဝေခြင်းဂရုစိုကျဖြစ်ပါတယ်။ Sostenete il nostro lavoro non-profit ။ Basta Paypal, သာ. ကောင်း၏ရာဌာန, Indiegogo ဏ il classico bonifico usare ။
Intestatario del conto: Pixel ကူညီ Foundation မှအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော GmbH သည်
donare su သည် သာ. ကောင်း၏ရာဌာနနှုန်း Formulario:
Campagna နှုန်းဈ diritti umani ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
Campañaမသန်စွမ်း los Consumidores
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈ တွင်ဤသုံးစွဲသူများသည်စားသုံးသူများအတွက်လိုအပ်သည်။ Canciller ၏ဖက်ဒရယ်နှင့် Parlamento alemán, သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် del asiento, အခွင့်အလမ်းများသည်တစ် ဦး သည်grabación de medios de comunicaciónညွှန်ကြားချက်ကိုလမ်းညွှန်။ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ၊ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှု၊ အိမ်ခြံမြေအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်း - အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း၏အချက်အလက်များအားအလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Attac ကိုယ်စားပြုသော Pixel ၏သက်တမ်း“ Comience su propia revolución” ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သောကူညီထောက်ပံ့မှုကိုကူညီသူ Shitstorm သည်အပြစ်ရှိသည်ဟူသောအချက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဌာနများ၌ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ NSA အနေဖြင့်နအဖ၏ NBSP နှင့် Embajada de Estados Unidos en escándalo de la NSA y နှင့် gestionados တွင်ရှိသောဤစင်တာများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့်လှုပ်ရှားမှုများ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ၁၄ ကြိမ်မြောက်အစီအစဉ်တွင်လူအများအပြားကလူစုခွဲရန်အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်သည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်း၏စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၂၀၁၅ ဒေါက်တာ Armas del Dr. ၀ န်ကြီးချုပ်များဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေး ဦး စီးဌာနသည်စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Campañaမသန်စွမ်း los Consumidores ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
la နှုန်း Campagna tutela dei consumatori
ရေဒီယိုကetelevisione အဖြစ်ဗီဒီယိုကို
ငါ 2008 ခုနှစ် PixelHELPER အများကြီးစားသုံးသူကိုစားသုံးသူ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ရှေ့ပြေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်မီဒီယာများနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြသထားသည်။ Hypo အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန် Pixel Helper မှကူညီပံ့ပိုးပေးသော Pixel Helper ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ Pixel အထောက်အကူပြုသူကို“ Comincia la tua rivoluzione” ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ငါနှစ်သက်သည်။ Nel 2009, PixelHELPER သည် Lanciato una tempesta mediatica per senzatetto, su molti media tedeschi, tru cui il Süddeutsche Zeitung,“ Feuilleton” တွင်ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ PixelHELPER သည် NSA ၏ ၁၀ နေရာတွင် NSA ၏ ၁၀ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များ၊ မီဒီယာလုပ်ငန်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် NDS နှင့် dimostrazioni settimanali တို့ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ PixelHELPER တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ PixelHELPER သည် livestream Crowdfounding al mondo အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ Nessun'altra စံသတ်မှတ်ချက်è so attiva လာ PixelHELPER nel campo delle proiezioni con le luci, riguardanti temi sociali e, inoltre, nessunaprovazione è coperta so largament dai media ။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Dr. Oetker (Cameo) ottenne ကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးပါ။
ဗီဒီယိုကို della campagna အီး apparizioni ရုပ်မြင်သံကြား
la နှုန်း Campagna tutela dei consumatori ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
Campagne Les consommateurs လောင်း
သတင်းဖော်ပြမှု VIDEO က de ရေဒီယို et de ရုပ်မြင်သံကြား
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင် PixelsHELPER သည် consommateur တွင်ပါဝင်သည်။ Chancellerie အဖွဲ့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ညီလာခံ National National allemande သည်ဤလုပ်ငန်း၏ဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာများကိုဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။ Hypo အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းအတွက်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ရန် - Pixel Helper မှသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်“ Commencez votre révolution” d'Attac ၏အလှူရှင် PixelHELPER le Prix ၏သားလေးကလေးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ PixelHELPER သည်Lancé une စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည် sans-abri နှင့် et numbreux médias allemands များကိုပြုလုပ်သော“ Feuilleton” ဆောင်းပါးပါသည့်Süddeutsche Zeitung မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ ၀ င်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် PixelHELPER သည် NSA ၏အရှုပ်တော်ပုံ ၁၀ ခုအား Campasses ၏ United States နှင့် Unis et al gandondi တွင်အရှုပ်တော်ပုံနှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီး hebdomadaires များအားမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ PixelHELPER ၏ပရိုဂရမ်မာတွင် ၁၄ နှစ်အောက်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသောငွေကြေးအကျပ်အတည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ PixelHELPER သည်တက်ကြွသောလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ လူမှုရေးအသင်းများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ထို့အပြင်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ Donc, 2009 ခုနှစ်, Les nouveaux ချီတက်ပွဲအုပ်စုဒေါက်တာ စီမံကိန်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံများသည် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊
ဗီဒီယိုတစ်ကားက de campagne et la ရုပ်မြင်သံကြား apparitions
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တွစ်တာတို့တွင်ပါ ၀ င်သည့်မိတ်ဖက်များပါ ၀ င်သည်။ အကြောင်းပြချက်, nous စီးရီးကင်းထောက်များအမြဲတမ်း nos campagnes en to အဆက်မပြတ် pouvons ဆက်လက်သွန်းလောင်း။ ငါယူရိုကွာခြားချက်မျှမျှတတခြားနားချက်! Le partage est l'entraide bienfaisance notretravir soutenir s'il vous plaît။ Paypal, Better Place, transfert ဂန္ထဝင်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်လုံလောက်သည်။
Compte Les အလှူငွေများလောင်း:
Détenteur du compte: Pixel ကူညီ Foundation မှအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော GmbH သည်
Formulaire အလှူငွေများလောင်းသည် သာ. ကောင်း၏ရာဌာန dans
Campagne Les consommateurs လောင်း ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ Berlinoedi altri consolati americana, Dusseldorf, Francoforte နှင့် Amburgo တွင်ရှိသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Stasi of of America တွင်“ NSA in da house” အမည်ရှိသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုသည် spionaggio spudorato da parte dell'NSA သို့မဟုတ် servizi segreti americani ။
NSA သည်ကွဲပြားသောအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားသည်။ Inoltre, si è giustificata dicendo che“ se non hai niente da nascondere, non hai nulla da temere” ။ အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုဆန့်ကျင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Skype, WhatsApp ၏“ 3rd Degree Friend” သည်အခြေခံအားဖြင့်သူမနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်း, တစ်ပြိုင်နက်တည်းသင့်ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကိုသင်တစ် ဦး တည်း4Attacchi ။ လုံခြုံမှုအရလုံခြုံမှုအားလုံခြုံမှုအပြည့်အ ၀ မရရှိခြင်း၊ PixelHELPER အဘယ်သူမျှမ crede di no: တစ် ဦး လျှင် abbiamo lanciato questa campagna ။ အဓိကအားဖြင့်အောင်မြင်မှု (၁၃) ခု၏မီဒီယာသို့မဟုတ်မီဒီယာနှင့်မီဒီယာ? ဂျာမနီနိုင်ငံရှိစီအိုင်အေတစ် ဦး လျှင် L'uscita dal paese dell'alto commissario
ဗီဒီယိုကို della campagna အီး apparizioni ရုပ်မြင်သံကြား | ZDF 37Grad, Arte ပုဒ်, ကို TED X ကိုနယ်သာလန် |
Oliver mostra, Olanda ရှိ TED-Talk တွင်၊ ပွဲတော် del Luci၊ Attivismo ပွဲတော် (ad esempio, caricature luminose contro l'Arabia Saudita, l'NSA, ecc ။ , Oppure, la tempesta mediatica) နှုန်း မြင်နိုင်သောမြင်ကွင်း၊ သင့်လျော်မှု၊ al-tema dei senzatetto၊
DDD အစီအစဉ်တွင် dell'emittente tedesca ZDF, ၃၇ ဒီဂရီ၊ PixelHELPEReOliver mostrano သည် Berlino ၏သမုဒ္ဒရာသို့ကူးပြောင်းသွားသည် Dusseldorf တွင် Bancer တစ္ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်“ NSA in house in” ဟုခေါ်သည့်“ NSA in house” နှင့်“ all inarrivo della polizia” ဖြစ်သည်။
PixelHELPER da ARTE လမ်းကြောင်းများ။ Berlino အတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ Oliver သည်စံသတ်မှတ်ချက်အရဗဟုသုတပြည့်စုံစွာပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်။ “ BMW invece di BND (Federal Intelligence Service, ovvero i servizi segreti)” သည်လူကြိုက်များသောလူတန်းစားများကြောင့်ဖြစ်သည်။
PixelHELPER နှင့် KimDotCom ၏ presso l'ambasciata americana ။ အမေရိက၏ယူနိုက်တက် Stasi က။ Pubblicato sullo mirror ။ questo ဗီဒီယို fatto အတွက် casa viene mostrata un'altra operazione contro l'ambasciata americana ။ Sui muri brilla la scritta“ အမေရိက၏ United Stasi of”, ma solo finché non arriva la polizia ။
PixelHELPER, NSA ၏ servizi segretieNSA ။ 15/07/2013 တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော“ United United Stasi of America” အမှတ်တံဆိပ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ Stasi of the United States, Anonymus al consolato americano ။
Proiezione doppia LIVE nello စတူဒီယို dDR W Anke Engelke ။ ဗီယင်နာရှိ BSA နှင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ NSA in house in NSA in logo အိမ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်ဗီဒီယိုဖိုင်များ
Amburgo, နယူးယောက်အခြေစိုက် unca barca della polizia, proiezione all'ambasciata americana di Amburgo ။ ဗီယင်နာသည်သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိအော်လီယာနှင့်စက်တင်ဘာလတွင်ဗီယင်နာတွင်ဖြစ်ပွားနေသောပြဇာတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာတွင်, အမ်ဘိုရို, am troolo davanti al consolato americano, pedalòအတွက် che raggiungono ။ NSA သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ L'operazione fu interrotta come tutte le altre: dalla polizia ။
"ဟုတ်တယ်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ်!" Prosieben TV Prank ကိုကျော်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ဗီဒီယိုကြေးမုံသည် Oliver နှင့်အဖွဲ့သည်ကိုလိုနီနိုင်ငံရှိ“ Schlag den Raab” အတွက် un'operazione durante l'evento“ Schlag den Raab” အဖွဲ့မှလာသည်။ sul corpo dipinsero il motto“ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ကသူလျှို” ဖြစ်တယ်။ Purtroppo, l'operazione fu subito scoperta dalla sicurezza ။
donare su Indiegogo နှုန်း Formulario:
Campagna contro lo stato di sorveglianza ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
“ NSA in da house” နှင့်“ Estados Stasi de América” ကိုဘာလင်နှင့်ဒူရှယ်လ်ဒေါ့ဖ်၊ ဖရန့်ကတ်ဖ်နှင့်ဟမ်းဘတ်တို့အပါအ ၀ င်အခြားအူရီဒန်ကောင်စီမှ estadounidenses တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ NSA နှင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
NSA သည်အကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်ရေးထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ Además, se justifica diciendo -“ Si no tienes nada que ocultar မရှိ tienes nada que temer” ။ NSA အဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း NSA ၏အကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်သောအကြမ်းဖက်မှုများကိုပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ Sky Tele, Skype၊ Whatsapp ဆွေးနွေးမှုများသည်အကြမ်းဖက်သမားများကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်“ 3rd Degree amigo” တွင်အခြေစိုက်သည်။
အမေရိကန်သံရုံးရှိ KimDotCom နှင့် PixelHELPER အမေရိက၏ယူနိုက်တက် Stasi က။ SPIEGEL“ DerPakt” တွင်ထုတ်ဝေသည်။ ဤအိမ်လုပ်ဗီဒီယိုသည်ဘာလင်ရှိအမေရိကန်သံရုံးကိုနောက်ထပ်အရေးယူမှုတစ်ခုပြသသည်။ နံရံတွင် "United Stasi of America" ​​ထွန်းလင်းသော်လည်းရဲများရောက်သည့် အချိန်မှစ၍
l'état de monitoring ကိုကန့်ကွက်သည်
ဆောင်းပါးတွေက de စာနယ်ဇင်းဓါတ်ပုံများ
“ NSA in da house” နှင့်“ United Stasi of America” သည်ဘာလင်နှင့်ဘာစီလိုနာနှင့်အယ်လ်လမ်ဂျင်ကောင်စီ၏ဒူဆဲလ်ဒေါ့ဖ်၊ ဖရန့်စ်ဖ်နှင့်ဟမ်းဘတ်တို့မှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ NSA နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
NSA သည်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ အကြမ်းဖက်မှုများကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ Enrere, il se justifie en disant:“ Si vous avez rien à cacher, vous avez rien à craindre” ။ NSA စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသည်။ တယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောမှုများမှ Skype နှင့် Whatsapp တို့မှအကြမ်းဖက်သမားများသည်“ 3rd Degree Friend” အခြေခံစည်းမျဉ်းပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။
de ပေါင်း, étéempêchés ont စောင့်ကြည့်, seulement4attaques က de CES နည်းစနစ်àကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။ est-il utility vendre Notre privée Une sécuritéသိသာ, ပြောင်းဖူးirréelလောင်းတု? pixel ကူညီ croit Que မဟုတ်တဲ့: cell est la raison laquelle nous Avon လှံ cette campagne သွန်းလောင်း။ le ဝန်ကြီးချုပ်après 13 Project (Une chaque semaine) et Une Grande couverture médiatiquesuccès? la ပတ်သဏ္ဌာန်တူ du ပေါင်း Haut စားဖိုမှူး de la စီအိုင်အေ en Allemagne ။
ZDF 37Grad, Arte ပုဒ်, ကို TED X ကိုနယ်သာလန် | | ဗွီဒီယိုတစ်ခုက de campagne et la ရုပ်မြင်သံကြား apparitions
အိုလီဗာ montre dans Une ကို TED Talk ကို dans Les Bas, Les projets sur lesquelles il s'est ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုချေ: ပွဲတော် des lumières, activisme (စသည်တို့ကို l'Arabie Saoudite, la NSA က, contre ရုပ်ပြောင်များတန်းတူနည်းလမ်းနမူနာ, ou la tempêtemédiatique, des Sans-abris, Que sinon theme ပေးအပ်ခြင်းvisibilité au လောင်း serait တန်းတူ Les မီဒီယာကိုလျစ်လျူရှု။
Dans un documentaire du အစီအစဉ်ကို37º de la Chain က de ရုပ်မြင်သံကြား allemande ZDF, pixels ကိုကူညီ et မှာ Oliver Mont ငှားမှတ်ချက် ils ont organisé Une projection dans l'ambassade américaineက de ဘာလင်။ သငျသညျ retrait က de သား projecteur de la ရဲတပ်ဖွဲ့arrivée jusqu'au Dusseldorf, le suivant rendez-vous avec la Presse et, တန်းတူ finir, la projection des mots "da အိမ်တော်၌ NSA က" ကုလသမဂ္ဂဘန်ကာ dans ။
pixel ကူညီ chez Arte ပုဒ်။ ဘာလင်စီမံကိန်း sur Les murs des န်ဆောင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်များ။ Cette VIDEO montre Une attaque က de qu'Oliver တစ်organisés devant le bâtiment des န်ဆောင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်များကိုlumières။ la projection montre Les mots "BMW ကား au အစားက de BND (Bundesnachrichtendienst, CA veut ဆိုးရွား Les န်ဆောင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်များ)" qu'ils utilisent contre le peuple ဆန္ဒပြသူ contre les method က de စောင့်ကြည့်သွန်းလောင်း။
pixel ကူညီ avec l'ambassade américaineကင်မ် Dotcom dans ။ အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ။ Publié sur le မှန်။ Dans cette Videos Home-ကို လုပ်. , Une autre အော်ပရေတာ contre l'ambassade américaine est Montree ။ sur Les murs Brillent Les mots "အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ" ce Que la ရဲတပ်ဖွဲ့ရောက်လာ mais seulement jusqu'à။
le ဂျာနယ် WDR parle က de pixels ကိုကူညီ, ဝန်ဆောင်မှုများလျှို့ဝှက်ချက်များကို et NSA က။ Dans extrait du ဂျာနယ်က de 15 / 07 / 2013 cet, le သတင်းစာဆရာ raconte la projection du လိုဂို "အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ" organiséeတန်းတူ Les လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ d'အမည်မသိ devant le consulat américain။
နှစ်ချက် projection တိုက်ရိုက် au စတူဒီယိုက de WDR က de Anke Engelke ။ Cet autre VIDEO အိမ်မှာလုပ် montre comm Les diapos avec le လိုဂို ont été et Mont projetés devant Les bâtiments des နိုင်ငံများအသင်း Unies "NSA က da အိမ်တော်၌" Vienne à Bonn et à။
စီမံကိန်း l'ambassade américaine d'Hambourg, rendez-vous entre un pédalo et un bateau de la ရဲတပ်ဖွဲ့က။ la VIDEO et montre စက်တင်ဘာလ dans Une ferme idyllique autrichienne အတွက်မှာ Oliver, tandis qu'ils ပြင်ဆင်မှု Les autrichiens Vienneala NSA က contreala ဆန္ဒပြမှုများ။ suivant en, ils sont devant le consulat américain Hambourg à, Que en ils atteindre နင်းလှေ။ Ils projettent un drapeau autrichien, avec le blason de l'Autriche et, autour, Les mots "အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ" ။ သည် L'တန်းတူ la ရဲတပ်ဖွဲ့ interrompue တစ်étéစစ်ဆင်ရေး။
"ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ! "Schlag တွင်း Raab, ProSieben တီဗီနောက်ပြောင်မှုများ။ la VIDEO explique မှတ်ချက်မှာ Oliver et သား Equipment ont peint le Corps d'un garçon, Cologne à l'ပင် "Schlag တွင်း Raab" Une အော်ပရေတာကိုလောင်း။ sur le Corps ils ont peint Les mots "ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့» et la မျက်နှာ d'သမ္မတအိုဘားမားစူးစမ်း။ Malheureusement, l'အော်ပရေတာတစ်ဦးétédécouverteimmédiatementတန်းတူ la sécurité။
Formulaire Les အလှူငွေ sur သာ. ကောင်း၏ရာဌာနလောင်း
l'état de monitoring ကိုကန့်ကွက်သည် ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
သည် L'Amore မဟုတ်တဲ့ conosce confini
le Nazioni စည်းလုံးစေ dovrebbero inviare dei sette caschi arcobaleno nei paesi l'omosessualitàela morte punibile con, နှုန်း questo fermare ရာဇဝတ်ကောင် contro l'umanitàချိုးငှက်။ အီရန်ခုနှစ်, နိုင်ဂျီးရီးယား, အာရေဗျ Saudita, အီး negli အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှ Arabi, essere omosessuale può portare alla Pena di morte ။ အယ်လ် momento မဟုတ်တဲ့c'è nessuno stato Islamico che riconosca ufficialmente le coppie omosessuali ။
သည် L'Amore မဟုတ်တဲ့ conosce sesso, အရောင်ဏဘာသာ, nessun မသန်မစွမ်းဏ ETA ။ သည် L'Amore မဟုတ်တဲ့ consce confini ။ pixel ကူညီ sta iniziando una campagna နှုန်း l'Amore omosessuale, considerato ရာဇဝတ်ကောင်အတွက် molti stati del မန်းဒ un che E ancora ။
la cosa più controversa, နဲလ် dibattito tra le မတူညီ scuole di pensiero,ela quale SIA più punizione appropriata caso နှုန်း caso ။ le, alla Pena di morte Variano Dallas flagellazione opinioni ။
pixel ကူညီ trova folle che Quest misure siano ဆိုးဝါးပြင်းထန်လွန်းသော Applications su ပုဂ္ဂိုလ်ရေး che cercano di amarsi Liberation, နဲလ် 2016 ။ Rimanendo fede အယ်လ် nostro ဆောင်ပုဒ် "မေတ္တာစေ, မစစ်" speriamo che questi stati cambino le loro politiche အီး la smettano di condannare l'omosessualità။ ဂါနာတွင်, che E un modello di considerato democrazia dalle potenze occidentali ့လိင်တူချစ်သူ sono perseguitati, torturati အီး uccisi ။ Noi esortiamo la comunità internazionale, affinchè, finalmente, intervenga ။
သည် L'Amore မဟုတ်တဲ့ conosce confini ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
Campañaအယ်လ် Amore မျှ conoce Frontera
Que enviar cascos arcoíris en los siete Pais donde la homosexualidad က punible con la muerte, မသန်စွမ်း parar este el ONU Tendria humanidad la Contra crimen ။ en အီရန်, နိုင်ဂျီးရီးယား, အာရေဗျ Saudita, y က en los Emiratos အာရပ် UNIDO, SER လိင်တူဆက်ဆံ puede llevarala muerte ။ Ahora မျှမြက်ပင် ningun estado Que islámico reconoce oficialmente Las parejas homosexuales ။
အဘယ်သူမျှမ conoce sexo Amore el, ဘာသာရေးဏအရောင် ninguna discapacidad ဏ edad ။ အဘယ်သူမျှမ conoce Frontera Amore el ။ pixel ကူညီestá empezando una campaña por el လိင်တူဆက်ဆံသူ, queer, todavía Amore, က crimen en muchos estados del Mundo un considerado ။
la cosa စရဖ controvertida es Que, el ဆွေးနွေးငြင်းခုံ entre Las escuelas က de varias pensamiento en, က el castigo ပိုပြီး adecuado caso por caso ES cual ။ လာ့စ်ဗီးထင်မြင်ချက် Varian entre la flagelación, y က la Pena က de muerte ။
pixel ကူညီ piensa Que es una locura aplicar esas 2016 en, Que quieren မသန်စွမ်းprácticas draconianas amarse Liberation personas ။ Mente ", မေတ္တာစေစစ်ပွဲ" ဟု nuestro lema ကျဆင်း, esperamos Que estos estados Cambien sus políticas y က dejen condemnar la homosexualidad ။ S ကဂါနာ, Que es considerado un မော်ဒယ်က de democracia por los poderes occidentales, los y က Matados torturados, သား perseguidos ဂေး။ Nosotros pedimosala comunidad internacional Que intervenga, por တောင်။
Videos အ de la campaña y က Apariciones en ရုပ်မြင်သံကြား | ဂျာမန်လှိုင်း, RT ကို |
por မျက်နှာသာ, comparta nuestros proyectos en Facebook အက y တွစ်တာ! si usted apoya nuestra causa, tendríamosမသန်စွမ်း cualquier donativo agradeceria Que seguir podamos က de forma အမြဲတမ်း nuestras Campañas။ ယူရိုမသန်စွမ်း hacer una diferencia pocos Incluso unos! Compartir es Buenos ။ por nuestro trabajo က de caridad apoye မျက်နှာသာ။ တစ်ကိုယ်တော် Tien Que utilizar este Paypal, သာ. ကောင်း၏ရာဌာန, Indiegogo ဏ la transferencia clásico
Campañaအယ်လ် Amore မျှ conoce Frontera ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
OU l'est homosexualitépénible avec la mort7လူအမျိုးမျိုးà casques ကို arc-my-ciel ၏သည် L'ONU devrait immédiatement envoyer l'humanité contre ရာဇဝတ်မှုarrêter ce သွန်းလောင်း။ en အီရန်, နိုင်ဂျီးရီးယား, Mauritania, Soudan, ယီမင်, Arabie Saoudite, et les EAU être peut homosexuel Results en peine က de mort ။ il n'y တစ် pas des လူအမျိုးမျိုး islamiques OU Les စုံတွဲများလိင်တူချစ်သူ sont reconnues officiellement ။
သည် L'Amour ne connait pas က de sexe, couleur, pas des Handicap အသက်အရွယ်အူရား, ဘာသာရေးအူရား။ Frontières၏သည် L'Amour ne pas connait ။ pixel ကူညီတင်သည့် Une campagne l'Amour homosexuel, qu'est encore ထည့်သွင်းစဉ်းစား un ရာဇဝတ်မှုက de beaucoup d'ဆောင်သော du Monde သွန်းလောင်း။
ပိတ်ဆို့မှုသင့်လျော်သောပေါင်း ce qu'est အငြင်းပွားဖွယ်ရာ, dans cette Ecole က de pensée est quelle serait la la CES အမှုပေါင်းသွန်းလောင်း။ de la flagellationala mort အမျိုးမျိုးက Les ထင်မြင်ချက်များ။
pixel ကူညီ croit Que c'est fou Que CES ပြစ်ဒဏ်ခတ် draconiennes peuvent êtreàinfligéesချေမှုန်းရန် qui veulent aimer librement en 2016 ။ espère Que CES အပေါ်က D'après le ဆောင်ပုဒ် "မေတ္တာစေ, မစစ်" et arrêter de l'condamner homosexualité changeront leurs politiques états။ S ကဂါနာ, qu'est ထည့်သွင်းစဉ်းစား un Model က de démocratieတန်းတူ Les ဆောင်သော occidentales, Les ဂေး sont ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု, နှိပ်စက်, et toués။ တိုကျတှနျးနှိုးဆျော la communauté intervenir àအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင်။
L'amour ne connait pas des frontièrs ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
31.05.2016/XNUMX/XNUMX Proyección -“ အိမ်မှာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု”
Justo en tiempo မသန်စွမ်း la votación del parlamento inglés, pixels ကိုကူညီဟက်တာ proyectado Las တစ် un tren Que Otoman Deporta junto "လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု" y "Aghet" တစ် los armenios တစ် Las imágenes del Olocausto စကားပုံ, atrás del palacio del gobierno alemán palabras ။ Dado Que la Turca embajada ahora está como protegida ဝိန်း Fort Knox, el palacio de la Cancillera alumbrar hemos decidido ။
Esta acciónက de protesta se refiereala ထုတ်ပယ်ခြင်းက y el asesinato က de hasta 1,5 millones က de armenios, arameos, y က los llamados Griegos pónticos, Que entonces el Imperio Vivian en otomano asirios ။ Como sucesor del Imperio otomano, Turquía Tien Que admitir Que Las atrocidades cometidas, အဘယ်သူမျှမ obstante Las repetidas negaciones, သား un genocidio ။ အာဒိုဂန်က y sus camaradas consideran Que el utilizo del término genocidio un ataqueala Turquia က de hoy ES ။
pixel ကူညီဟက်တာ publicado los versos autorizados por el ခုံရုံးက de Hamburgo de la poesíaက de Boehmer လူကို proyectandolos en Frente de la embajada Turca ။ မသန်စွမ်း nosotros, 1933 en como #Erdogan က exactamente #Hitler အယ်လ် principio က de su Reinado del ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los #dictadores merecen က de SER provocados con los artistas y က caricaturas por los derechos humanos က de activistas ။
Pensamos Que es completamente legítimo comparar el principio del regimen က de ဟစ်တလာ, con otros déspotas y က Monarcas Que hoy el Mundo gobiernan ။ မသန်စွမ်း nosotros, los jefes del estado de အာရေဗျဆော်ဒီ, Catar, အိုမန်, ဘာရိန်း EAU က y como သားဟစ်တလာ exactamente ။ todo estos líderesအမှန်တကယ် Apoyanala esclavitud con el sistema "kafala" gracias အယ်လ် cual los က de los trabajador သား confiscados pasaportes ။ por eso ကြောင့် prohibido irse del paísအပြစ်တရား el consenso က de los empleadores ။
ဒါဟာ asi Que Las funcionan monarquías absolutas en el Oriental Próximo။ se Basa en la vigilancia စုစုပေါင်း el sexismo က y la brut mentalidad ။ အယ်လ် Holocausto sigue siendo UNO က de los စရဖ capitulos feos de la historia de la humanidad ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, Las acciones por nuestros inhumanas cometidas llamados aliados en အာရေဗျဆော်ဒီ, Turquía y က otro en ခဲ့သည်များသား el Mundo en de las ပေဂုရဘုရားအကျပ်အတည်း Humanitarias Que pasan unas ။
y က Monarcas ABSOLUTOS apoya တစ် los derechos humanos déspotas Nuestra campaña Contra estos ya la liberaciónက de los presos နိုင်ငံရေး။ la comparación entre estos líderes y ကဟစ်တလာ es un muy importante Recordatorio, က de lo Que podría pasar si el မျှ luchara Contra ellos Mundo ။
Nuestra Proyecciónဟက်တာ llamado la atenciónက de los medios က de comunicación internacionales y ကဟက်တာ hecho Que estas cuestiones Humanitarias muy မျှ fueran olvidadas importantes ။ Compartid nuestros proyectos en Facebook မှာ! si apoyas nuestra causa, agradeceríamos mucho recibir Donaciones, Que nos permitan က de nuestras continuar Campañas။ Incluso pocos ယူရို pueden marcar la diferencia! Apoyad တစ် nuestro trabajo!
Titular: အမြတ် pixels ကိုကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ
los estadios မသန်စွမ်း la Copa Mundial က de Catar construyen 1,8 millones က de "esclavos modernos" la organizaciónမျှ lucrativa pixels ကိုကူညီ quiere proyectar una caricatura က de Luce artísticas, en la puerta ကျောင်းအုပ်ကြီး del palacio de la embajada က de ဘာလင်, မသန်စွမ်း Que esas violaciones က de los derechos humanos se conozcan ။ Posadero de la Copa Mundial, ကာတာဟက်တာ prometido Que Las condiciones က de los trabajador mejorará Migrant ။ သိန်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေး, nada Cambió။ en los dormitorios huele တစ် excrementos က y los trabajador က de sus derechos သား deprivados ။
အယ်လ် llamado "sistema-kafala" Permit Que Las empresas prohiben တစ် sus trabajador Que Cambien trabajo ဏ se အရှင် del país။ los pasaportes က de sus empleados y ကို se los retiran los empleadores တစ် menudo, တစ်ကိုယ်တော်después la terminacion del contrato devuelven ။ ဒေသမူများ pueden transferir como los trabajador en otras empresas quieran အပြစ်တရား su deber preguntar consenso empresarios los ။ "trabajador Muchos တစ် menudo မရှိ reciben ninguna compensación por muchos meses y ကသား obligados အပြစ်တရားရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ရေးတစ် trabajar bajo amenaza de la completa pérdida del sueldo ဏ la deportación။ " Ha dicho la experta က de Catar မသန်စွမ်းနိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ en Alemaniaala Revista "ဒီ အချိန်, "Regina Spöttl။
Según el ONU Catar Tien la tasa က de trabajador ရွှေ့ပြောင်း del Mundo del Mundo, က de hecho, en función de la poblaciónစုစုပေါင်း el 88% de la población es က de သြရီဂျင်ကို extranjera ။ trabajador estranjeros, PRACTICAMENTE, desempeñan funciones Manual y က todo los proyectos က de construcción Que fueron llevados တစ် cabo en el estado pequeño los, incluyendo la construcciónက de los entera estadios မသန်စွမ်း la copa mundial 2022 ။ အယ်လ် trabajo práctico, en la cultura catari မရှိ es visto con buen ojo ။
Campaña por los derechos humanos ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
Campagna: fermiamo il commercio di Army!
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ "Thanx no Tanks" တွင်ဖော်ပြထားသောအာရာဘီဆော်ဒီ၊ PixelHELPER proietta, davanti al palazzo del governoel'ambasciata dell'Arabia Saudita, il grido esportazioni di carri armati verso အားလုံးချက်ချင်းရပ်တန့်သွားကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အာရပ်နိုင်ငံ၏ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသည်ယူရိုငွေသန်း ၁၈၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြည်နယ်၏တရားဝင်စာရင်းအင်းသည်ယူရိုငွေသန်း ၁၈၀ (ပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကြီးမားသောဘရတ်တဂရားနှင့်အစ္စရေးနိုင်ငံ၏တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်) ဖြစ်သည်။
ဥရောပဂျာမနီနိုင်ငံမှ damp'esportazione di armi ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့၏တစ် ဦး ချင်းအဆင့်ညီမျှမှု, invece, occupa, dietro gli ။ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်ယူထားသည်မှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသည်အာရေဗျဆော်ဒီတွင်လာရောက်သည်။ Tutto questo non può andare avanti ။ Vogliamo ဒဏ်ငွေ agli affari con la morte ။
ဂျာမန်လှိုင်း | ဗီဒီယို della campagna အီး apparizioni ရုပ်မြင်သံကြား |
Installazione di Lucy presso il Palazzo del governo tedesco တစ်ဦးကြောင့် piani autobus da un ။
Campagna: fermiamo il commercio di Army! ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
Campaña: detener el comercio က de armas!
နိုင်ငံရပ်ခြားသို့တင်ပို့သည့်နိုင်ငံများမှအာရေဗျနိုင်ငံဆော်ဒီတွင်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏စီမံကိန်းများအတွက်အာဆီယံ - Detener el tráfico de armas, las palabras“ Gracias no hay tanquesaArabia Saudí” en la Cancillería Federal and la Embajada de Arabia Saudita ။
ဖောက်သည်များအနေဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အာရပ်နိုင်ငံ၏ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ယူရိုသန်း ၁၈၀ ခန့်တင်ပို့နိုင်သည့် Gran Bretañaနှင့်အစ္စရေးနိုင်ငံသည်စစ်ဆင်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
Alemania el campeónက de ယူရိုပါလိဂ် en la exportaciónက de armas ES ။ တစ်ဦးက nivel mundial Que lleva detrásက de los EE.UU. y က rusia en el tercer ခဲ့သည်များ။ Gobierno ဖက်ဒရယ် alemanas con la aprobación de las armas y က equipo စစ်တပ်များ se suministran tambiénတစ် Las dictaduras က y como regimen autoritarios အာရေဗျ Saudita ။ အဘယ်သူမျှမ debe continuar Esto ။ Queremos establecer Las tiendas el တောင် de la muerte con ။
Videos အ de la campaña y က Apariciones en ရုပ်မြင်သံကြား | ဂျာမန်လှိုင်း |
Campaña: detener el comercio က de armas! ဇူလိုင်လ 15th, 2016အိုလီဗာ Bienkowski
Campagna နှုန်းဈ prigionieri politici